Oké egwu na -agwụ na Afghanistan na ndị Kabul gbara ndị Kabul gburugburu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Oké egwu na -agwụ na Afghanistan na ndị Kabul gbara ndị Kabul gburugburu
Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Onye isi ala Afghanistan na -akparịta ụka maka ndị Taliban ga -eweghara udo
Ụgbọ elu Air India na -agbada n'ọdụ ụgbọ elu Kabul International iji nyere aka nwa amaala India ịgbanahụ ụjọ ndị Taliban. Ụgbọ elu dị n'ala. Ọ bụrụ na ọ nwere ike ịpụ ọzọ dị na oghe.
Tt agwụla. Mkparịta ụka ruru nkwubi okwu ezi uche dị na ya. Mgbanwe nke ike na -enweghị ọbara na -ewere ọnọdụ na nhazi dị ugbu a.
Ozi ndị ọzọ ma ọ bụ ụjọ na ọgba aghara na -esite na Afghanistan na -abịa.
Turkey ga -echebe ma chịkwaa ọdụ ụgbọ elu nke nnabata, dị ka gọọmentị Turkey kwuru ma ọ bụ na ha na -ahapụrụ ya ndị Taliban ??
Ndị Taliban na gọọmentị Afghanistan na -enwe mkparịta ụka maka 'ntụgharị ikike nke udo', ụlọ ọrụ mgbasa ozi na -akọ
Pịa ebe a iji gụọ ka ngwụcha ngwụcha Sọnde a na ndị agha Taliban weghaara Kabul na obí onye isi ala Afghanistan
eTurboNews na -ebipụta nchịkọta akụkọ na mgbasa ozi mgbasa ozi site na nkeji iri atọ gara aga. A naghị edezi akwụkwọ ozi ma na -ese foto dị njọ banyere ihe na -eme na Afghanistan ugbu a.
Kabul na ndị Afghanistan ndị ọzọ buru amụma na ọ ga -ada ma emechaa taa na Sọnde, Ọgọst 15, 2021
Ebe ọ bụ na US na NATO na -apụ na Afghanistan, ndị agha Taliban nwere ike weghara Afghanistan niile n'ụzọ dị mfe. Ebee ka UN nọ? Hà dị?
Ihe m hụrụ ọtụtụ ebe gburugburu obodo Kabul: ọtụtụ ụjọ na -akpata ndị nọ n'ụgbọ ala ndị agha na -efufu ihe ha, na -agba ọsọ ọsọ, ọbụlagodi ndị na -eche nche na -agbagharị n'okporo ụzọ iji kpochapụ mkpọchi okporo ụzọ. N'oge a enweghị ihe ngosi nke ndị Taliban n'ime obodo. Ndị Taliban ekwuola na ha agaghị aba.
Onye agha taliban Na -akpọ isiala n'ihu Onye Pụrụ Ime Ihe Niile (swt) iji gosipụta ekele/ekele na Kabul. #Cabul #KabulHasFallen #Taliban pic.twitter.com/wmSCgXXnX2
“Anyị anaghị agụta ọnụ n'ihi na anyị si Afghanistan. Anyị ga -anwụ nwayọ n'akụkọ ihe mere eme ”Anya mmiri nke nwa agbọghọ Afghanistan enweghị olileanya nke ọdịnihu ya na -emebi emebi ka ndị Taliban na -aga n'ihu na mba ahụ. Obi m na -agbaji maka ụmụ nwanyị Afghanistan. Ụwa dara ha. Akụkọ ihe mere eme ga -ede nke a.
A na -eziga ndị agha US 5000 na ebe ọkụ ebe ụfọdụ nọworị na Kuwait wee debe ya na ebe ndọrọ ego ndị ọzọ ma na -ezighachi ha ka ha chebe nnabata wdg
China dị njikere ịnabata ndị Taliban dị ka gọọmentị nke Afghanistan.
Taliban n'ime nnabata agọnarị akụkọ akụkọ mgbasa ozi gbasara Mullah Baradar Akhund na -abịa iweghara ọchịchị nnabata.
Ka anyị nwee olile anya na ha ga-emepe ụgbọ elu Kabul ọzọ n'oge adịghị anya. Kabul bụ ọdụ ụgbọ elu obi ọjọọ iji gbadata wee si na (ọkụ, elu, ugwu), ụgbọ elu ahụ ga -abịa nke ukwuu n'ihi na anaghị ekwe nkwa inye mmanụ, ATC ga -arụbiga ọrụ ókè na nrụgide n'ihi ụgbọ elu ndị ọzọ. Oke nchekwa dị warara.
Na-agbasa ozi nnabata agbaala US Chinooks agbapụ ndị mmadụ ka anyị na -ekwu okwu.
Ndị na -atụ ụtụ US na -atụfu ọtụtụ ijeri nwere ike ijeri ijeri agha ahụ Afghanistan naanị ka ọ gafee n'ime ọnwa ole na ole mgbe ndị agha anyị hapụrụ.
Ya mere n'ikpeazụ #Cabul alaghachikwuru ndị nwe ya n'ezie. Allah bụ Al-Haq
Naanị ihe ịma aka maka ndị Taliban ga -abụ ịkọwa ọkwa ha kacha ala, mgbe ha banyere n'ọchịchị. Ndị Taliban gosipụtara nke a ugboro ole na ole, mana n'oge udo, ịdọ aka na ntị a ga -enwe ọtụtụ ike - ọ bụghị naanị ịdọrọ ma ọ bụ ịdọrọ ihe na -akpata ya.
Ndị ruru eru ịchị achị na -eweghachị ihe bụ nke ha. USA, INDIA, ISRAEL ọdịda gị dịkwa nso!
Dị ka akụkọ si kwuo, Onye isi ala Afghanistan Ashraf Ghani dị njikere ịgbapụ Afghanistan۔
Ndị agha Taliban na -aga "n'ọnụ ụzọ ruo n'ọnụ ụzọ" iji chịkọta ụmụ agbọghọ ka ha bụrụ "ndị ohu nwoke na nwanyị" maka ndị na -alụ ọgụ n'òtù ụjọ, akụkọ na -ekwu.
Chaị! Tom Tugenhadt na -ekwu na UK rịọrọ ndị otu ọdịda anyanwụ anyị na EU maka nkwado ndị ọzọ Afghanistan na -eso mwepụ mkparị nke Biden, onweghị onye buliri elu: kedu isi akụkọ !!!!
Ozi sitere n'aka ndị Etiopia dị mfe- Anyị, dị ka otu mba, a mụghị anyị ụnyaahụ. Anyị achọghị ịbụ Libya ọzọ, Yemen ma ọ bụ Afghanistan. Ntinye aka ndị mmadụ dị anya n'ihe ị na -ekwu na ha bụ.
Isi mmalite dị n'ime na -atụ aro na ndị isi Taliban na -anwa ịtọrọ na n'ike ịlụ ụmụ nwanyị mgbe a gwara ndị isi obodo na Afghanistan ka ha weta ndepụta nke ndị dị afọ 12 ruo 45 n'ọnwa gara aga.
#Taliban nwere ike zere mwakpo n'oge a dị oke mkpa, enwere ike ịtụ anya mgbanwe karịa mgbe ha ga-achọ iwu mba ụwa maka nhazi ọchịchị ọhụrụ na-adigide.
Afghanistan: Taliban abanyela na mpụga nnabata - dị ka gọọmentị Afghanistan na -ekwe nkwa mgbanwe ọchịchị n'ike udo. Akụkọ ụwa | Akụkọ Sky
Ọ dị mma ịmara na dịka nnabata daa, ụlọ ọrụ nnọchite anya anyị na -ere ọkụ, a na -achọkwa helikọpta iji chụpụ ndị anyị.
Air India rutere na Kabul iji chụpụ ụmụ amaala India. Hà ga -eme ya?
Onye isi ala Ghani ga -agba arụkwaghịm taa. Mulla Abdul Ghani Baradar, onye ndu Taliban na onye bụbu onye ozi ala ọzọ nke Islamic Emirates, ka ọ bụrụ onye isi oche nke oge #Afganistan n'obí onye isi ala, #Kabul.
Isi mmalite ụfọdụ na -ekwu na ndị Taliban agaghị ebuso Kabul agha, ebe a na -eme mgbanwe ọchịchị. #Afghanistan Ọkụ
Otu ụgbọ elu Air India A320. Na -agbada ugbu a #Cabul
Daysbọchị ole na ole gara aga US buru amụma ọdịda nnabata n'ime ụbọchị 90. Ndị agha Rangeela Ghani a enweghị ike iguzogide ruo awa 90.
Gọọmentị Afghan, nnukwu ọnụ mana enweghị obi ike na ugwu. kama ịlụ ọgụ maka ala nna ha, ha na -agba ọsọ maka mgbapu Eziokwu bụ na ọ bụghị ala nna ha, na USA mepụtara govt, ọ bụghị ezigbo gọọmentị Afgan.
Ndị agha Taliban abanyela na mpụga isi obodo Afghanistan Kabul mgbe ha jichara obodo Jalalabad na -alụghị ọgụ, ndị isi obodo ahụ kwuru.
Mpaghara pụrụ iche na @AJEnglish.
Helikopta na -akwụsi ike na -abịa ma na -aga #US ụlọ ọrụ nnọchite anya obodo.
Ọdịda nke #Cabul nwere ike na -eme ugbu a. Ọtụtụ akụkọ #Taliban ihe dị n'ime obodo, mana okwu ndu enyekwara ndị agha iwu ka ha kwụsị na oke obodo.#Afghanistan pic.twitter.com/oLFUvhKek8
America ga -abụ onye mbụ ma ọ bụrụ na Pakistan na China anabataghị gọọmentị Taliban. Ndị otu nwoke na-achị achị rụrụ nnukwu ọrụ ka ndị Taliban weghachite Afghanistan na-alụghị ọgụ. Ekwetala ihe ha na -ekwu na otu ha si eme omume. Ọ bụ iwu ya nnabata ugbu a!
Ndị Taliban nọ ebe dị anya iji weghara Afghanistan
RIP ndị agha Afghanistan !! Ka Chukwu zọpụta nwa amaala aka ya dị ọcha